Dalka Suuriya Oo Ay Kusoo Noqdeen Qaxoonti Tiro Badani. |
Dalka Suuriya Oo Ay Kusoo Noqdeen Qaxoonti Tiro Badani.
Kumanaan kun oo qaxoontiga reer Suuriya ah ayaa bilaabay inay ku noqdaan dalkoodii saacaddihii ugu dambeeyey , iyaga oo kasoo talaabaaya xuduudka dalkasi la wadaago dalalka Lubnaan iyo Urdun.
Sida lagu baahiyey warbaahinta Ruusiya Todhay waxa dalkaasi ilaa hadda ku noqday ilaa kun boqol iyo kow iyo soddon qof (1031) , qaxoontiga dib uga noqonaaya dalka Lubnaan ayaa 55 kamid ahi yihiin dumar, halka ay 95 kalena carruur yihiin.
Sidoo kale magaalooyinka Yabus iyo Talkhalkh oo ku taala xuduudka ay Suuriya la wadaato dalka Lubnan ayay kasoo gudbeen galabta 253 haween ah iyo 431 carruur ahi, kuwaas oo ku jiray xeryo qaxoonti oo halkaasi ku yaala.
Dhanka kalena Injineero u dhashay dalalka Suuriya iyo Ruushka ayaa bilaabay in ay dib u dhisaan guryihii iyo goobihii danta guud ee ku burburay dagaaladdii ka dhacay wadanka Suuriya , gaar ahaana magalaadda Xalab ayay Injineeraddaasi maanta gaadhey .
Dhanka kalena Ciidamada Suuriya iyo xulafadooda ayaa Miino saaris ka bilaabay magaalooyinka Ximis ,Suweydaa iyo Qanaydaydara ee dalka Suuriya , iyaga oo ilaa hadda nadiifiyey dhul gaadhaaya 10.6 Hektar iyo 4 Km oo Wadooyin ah , kuwaas oo laga saaray 62 Miino